Ny fitaovana fiantohana biby fiompy 16w Kabine hafanana Mat China Manufacturer
Description:Fiantohana biby fiompy mat,Carbon Heat Mat,Electric Waterproof Heater
Home > Products > Reptile Heat Pad > Under Tank Pad > Ny fitaovana fiantohana biby fiompy 16w Kabine hafanana Mat
Ny fitaovana fiantohana biby fiompy 16w Kabine hafanana Mat
Ny fitaovana fiantohana biby fiompy AC120V 16w Ny karbona hafanana Mat dia iray amin'ireo fitaovana mahomby indrindra azo ampiasaina mba hanomezana hafanana ho an'ny reptiliana sy ny amphibia. Ny raptiles sy ny amphibians dia mangatsiaka ary ao amin'ny toeram-ponenany voajanahary matetika no ampiasain'ny masoandro amin'ny hafanana Ny fonon-tsolika ho an'ny biby mandady dia fitaovana fantsom-panafody iray izay manala ireo tara-masoandro izay manasitrana ny masoandro. Izy ireo dia tsara kokoa ny loharanom-pahasalamana 24 ora ho an'ny karazana biby an-tapitrisany sy amphibiana ary ilaina indrindra ho loharano hafanana mandritra ny alina ho an'ny karazam-borona maro.
Raha mampiasa ny hafanana biby fiompy biby fiompy ho an'ny biby an-trano na ny biby mandady dia zava-dehibe ny tsy hametrahana azy ao amin'ny tranon'ny tantaram-biby na latabatra.
Samsung, LG, Simfer, Kohler, Panasonic, BROAN, sns. We are 100% willing and interesting to grow up with our clients each other
F: Azontsika atao ve ny mandefa ohatra?
A: Faly isika fa handefa santionany amin'ny fanamarinana.
F: Ahoana no hanamafisana ny hatsarana miaraka amintsika alohan'ny hanombohany mamokatra?
A: 1) Afaka manome samples isika ary afaka mifidy iray na mihoatra, ary avy eo dia manao ny kalita araka izany.
2) Alefaso aminay ny santionanao, ary hanao araka ny hatsaranao izahay.
F: Ahoana no hamaha ny olan'ny kalita aorian'ny fivarotana?
A: Manome tolotra roa taona izahay, raha misy olana, miangavy anareo haka sary momba ireo olana na alefaso
Olana samihafa ho antsika, ao anatin'ny telo andro, dia hanao vahaolana mahafa-po ho anareo izahay.
F: Inona no fotoana mitarika?
A: Amin'ny ankapobeny, 30 andro.
F: Azonao atao pirinty ny marika eo amin'ny vokatra?
A: Eny, Mazava ho azy. Azonao atao ny manao ny marika famantarana ny mpanjifa.
A: Mampanantena izahay fa ny vidin'ny soso-kevitra dia ambany indrindra raha fampiharana ihany, afa-tsy
Ampitomboy ny tsena.
Fiantohana biby fiompy mat Carbon Heat Mat Electric Waterproof Heater Fiompiana biby fiompy mat Fiompiana biby fiompy Fanafody fanangonana biby fiompy Fiompiana biby fiompy ho an'ny tank Fiofanana ho an'ny biby fiompy